हावा खायो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले : राजधानीको सडक उस्तै !
ARCHIVE, NEWSPAPER » हावा खायो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले : राजधानीको सडक उस्तै !
काठमाडौं - देशभरका दर्जर्नौ सडक खण्डको अवस्था निकै कहाली लाग्दो देखिएको छ । कतिपय डकहरु खाल्डा खुल्डीका कारण जीर्ण बन्दै गएका छन् भने कतिपय सम्बन्धित निकायको लापरबााहीका कारण कालोपत्रे गरेको एक साता नबित्दै भत्किन थालेका छन् ।
कालोपत्रे गरिएको केही दिनमै भत्किँदा यात्रु र सवारी चालक मागरमा पर्ने गरेको छन् । असारे बजेट सिध्याउनकै लागि पिच गर्दा ती सडकहरु दिर्घकालिन रुपमा टिक्न नसकेको यात्रु र सवारी चालकको गुनासो छ ।,यो खबर आजकोनेपाल समाचारपत्रमा छ ।